Zava-dehibe amin'ny fiaraha-monina amorontsiraka maro ny tontolo iainana Blue Carbon noho ny tombontsoa sarobidy omen'izy ireo.
Ho fanampin'ny tombotsoany amin'ny fitehirizana ny karbaona dia manome asa sy fidiram-bola ho an'ny toekarena eo an-toerana koa ny tontolo iainana karbonina manga, manatsara ny kalitaon'ny rano, manohana ny jono ara-pahasalamana ary manome fiarovana ny morontsiraka. Ny mangroves dia toy ny sakana voajanahary - manamafy ny morontsiraka izy ireo ary mampihena ny angovo onja mba hampihenana ny mety hisian'ny tondra-drano amin'ireo vondron'olona amoron-dranomasina amin'ny fiakaran'ny tadion sy ny fiakaran'ny ranomasina. Ny ahitra ahitra dia mamandrika ireo antsanga mihantona ao amin'ny fakany izay mampitombo ny fanamainana maivana, manatsara ny kalitaon'ny rano ary mampihena ny fikaohon-tany. Ny faritra mando amoron-dranomasina dia mandray otrikaina (ohatra, metaly mavesatra, otrikaina, zavatra mihantona) ka manampy amin'ny fitazonana ny kalitaon'ny rano sy fisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo. Ireto tontolo iainana ireto dia manome toeram-ponenana manan-danja sy toeram-pambolena mba hanohanana ireo jono sy karazana fialamboly isan-karazany (ohatra: snorkeling, jono fialamboly ary sambo, ecotourism).
Ny sary manaraka dia manasongadina ny tombotsoan'ny ala honko:
Serivisy ekolojika nomen'ny honko. Loharano: Wetlands International 2016
Tombontsoa miaro ny alan'ny ala honko. Loharano: Conservation International
Ny fikarohana dia maneho fa ny tolotra ara-tontolo iainana izay omen'ny ala honko dia mendrika ny tomban'ny US $ 33,000-57,000 isam-bolana isan-taona ho an'ny toekarena nasionaly amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana misy ala honko. ref
Siikamäki et al. (2012) dia nanombantombana ny tombana manerantany momba ny fatran'ny karbaona voaporofo amin'ny alàlan'ny famoahana ala honko ary ny fandaniana ny alàlan'ny famoahana; Hitan'izy ireo fa noho ny vidin'ny vidin'ny vidin'ny vidin-tsolika amin'ny karbaona sy ny vidin'ny fampihenana ny entona avy amin'ny loharano hafa, ny fiarovana ny ala honko ho an'ny karbaona dia fomba fiasa ara-toekarena. ref
Ny fandalinana iray tao Indonezia dia nahatsikaritra fa ny mangaronin'ny Indoneziana dia manana metaly 14 miliara metric (PgC) mampiseho ampahatelon'ny bolam-be. ref Ny fandotoana ny ala honko any Indonezia dia nahatonga ny fahaverezan'ny metan'ny 190 tapitrisa metric CO2 isan-taona. Noho ny fisorohana ny fandripahana ala honko, Indonezia dia mety hahatratra ny ampahefatry ny lasibatry ny famoahana baomba ataon'ny 26% amin'ny 2020. ref
Estrada et al. (2015) dia nanamarina ny lanjany ara-toekarena momba ny fitehirizana karbaona sy ny fikarakarana ny ala honko any atsimo atsinanan'i Brezila ary nahita fa ny soatoavina midadasika dia miovaova arakaraka ny karazana mangatra (ohatra: 19.00 ± 10.00 US $ ha-1 yr-1 ho an'ny ala kesika sy ny seranan-tsambo ho an'ny 82.28 ± 32.10 US $ ha-1 yr-1 ho an'ny ala mando sy ny faritra ambany). Ireo mpanoratra dia nanombatombana fa ny sandam-bolam-piaramanidina manontolo amin'ny ala honko dia US $ 455,827 isan-taona. ref Jereo ny fizarana loharanon-kevitra eto ambany ho an'ny fampahalalana fanampiny momba ny tolotra ecosystem momba ny ecosystem manga.
Ity sary an-tsary manaraka ity dia manasongadina ny tombony azo avy amin'ny ranomasina:
Loharano: Potouroglou, M., L. Westerveld, G. Fylakis. 2020. Ireo mahery fo an'ny ranomasina tsy an'arivony. Sarintanin'ny tantara, Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana momba ny tontolo iainana sy GRID-Arendal.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHamantatra bebe kokoa momba ny ranomasina - ny toerany, ny lanjany, ny fandrahonana ary ny torolàlana momba ny fitantanana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAtlas ny harena an-dranomasina
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy anjara asan'ny mangatsiaka amin'ny fanatsarana ny fandrosoana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToe-javatra mahazatra ankehitriny momba ny tsimok'aretin'ny Mangaraharamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFametrahana Modely ara-pitsarana manam-pahaizana momba ny varotra mangaraharamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy valin'ny fangirifirian'ny tany mangatsiaka ho an'ny ranomasina dia mitsangànamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampihenana ny rivo sy ny tondra-drano avy amin'ny ala honko
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanimbana tafiotra mahery vaika ataon'ny Mangroves
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy vokatra, ny fandaniana ary ny fiarovana ny sisintany dia tombontsoa amin'ny fiarovana voajanahary sy natiora
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMangroves ho an'ny fiarovana amoron-dranomasina: torolàlana ho an'ireo mpitantana amoron-dranomasina sy mpanao politika
Salt marsshes sy Seagrass
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampandrosoana ny Suivant Suivante Suivante amin'ny fametrahana Zava-tariby azo zaraina ho an'ny Fitantanana Habitatmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAndraikitry ny fikarakarana ny moron-dranomasina: rafitra sy fanadihadiana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy seranam-piaramanidina momba ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetr'andro any amin'ny faritra sy faritra
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikarakarana ny tontolo iainana an-dranomasina - Inona no manaraka?
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAvy amin'ny Blue: Ny lanjan'ny ranomasina any amin'ny tontolo iainana sy ny olona
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMaherifo tsy fantatra amin'ny ranomasintsika: ahidrano - Izay rehetra tokony ho fantatrao